Kismaayo News » Raafka Gawaarida oo Kismaayo laga sameeyay
Raafka Gawaarida oo Kismaayo laga sameeyay
Kn:Hadii aad horay u maqli jirtay raafka dadka, markani waxaan kuu haynaa ciidamada amaanka Kismaayo ee sida gaarka ah loo carbiyay oo maanta hawlgal ay magaalada ka fuliyeen ka filiyay Raaf bahsan oo ay ku sameeyeen gawaarida.
Ku dhawaad 70 gaari aya goob la isugu geeyay kadib markii ay soo baxday in magaalada la soo galiyay gaari ay ka buuxaan waxyaalaha qarxa oo lala maaganyahay in lagu bartilmaameedsado goobo muhiim ah.
Gawaarida ayaa loo baaray sal iyo baar, kadibna la fasaxay markii laga waayay raadkii soo galay, walow ay wali ciidamada amaanku foojignaan dheeraad ah qabaan. Sargaal aan wax ka waydiinay hawlgalka ayaa noogu fasilay inay heleen xog ku aadan qarax lagu fulin rabo gaari laga soo buuxiyay waxyaalaha qarxa oo magaalada la soo galiyay. Wuxuuna intaasi noo raaciyay inuu suganyahay amaanka jidadka soo gala magaalada oo ayna suuro gal ahayn walxaha qarxa iska daayee inuusan soo gudbi karin gaari bastoolad ay saarantahay, laakiin hadana aan uga danlahayn hawlgalka maanta inaan shakika iyo hubanti la’aanta ka saarno, Ilaahayna waanagu guuleeyay ayuu yiri, sargaalka oo ka cudur daartay inaan magaciisa xigano.
Horay waxaa magaalada kismaayo uga dhacay hawlgallo lagu bartilmaameedsanayo dadka looga shakisanyahay inay xiriir dhaw la leeyihiin Alshabaab ama ka tirsanyihiin laakiin inta aan ognahay waa hawlgalkii koobaad ee guud ahaan Soomaaliya meel kamid ah ka dhaca oo gawaarida wadar ahaan loogu raafayo, si loo xaqiijiyo amaanka shacabka, loogana hortago masiibooyin ay ku baaba’aan boqolaal dad ah.
Qaarkamid ah shacabka magaalada oo aan wax ka waydiinay talaabada ay maanta qaadeen ciidamada amaanka ayaa ku tilmaamay mid aad u heersaraysa, soona dhaweeyay.